Dowladda Soomaaliya oo Sheegtay in howlgal ku dishay mid kamid ah Amiirada Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo Sheegtay in howlgal ku dishay mid kamid ah Amiirada Al-Shabaab
MUQDISHO – Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada Milatariga howlgal ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka Sh/hoose ay ku dileen amaarkii Al-Shabaab ee gobolkaas.
Wasiirka Warfaafinta iyo Hanuuninta Dadweynaha dowladda Federaalka Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa sheegay in la dilay hoggaamiyihii Al-Shabaab ee gobolka Sh/hoose kaasoo lagu magacaabi jiray Macalin Cismaan Cabdi Baadil.
5tii May 2017 ayey Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ay dileen Hoggaamiyahii Al-Shabaab Macalin Cismaan Cabdi Baadil iyo saddex maleeshiyaadka kooxdaas ah. Dhimashada hoggaamiyaha waxey wiiqeysaa awooda kooxda argagaxisada ah ee ka howlgasha Shabeelaha Hoose, taasoo ah guul weyn oo u soo hoyatay ciidanka iyo nabadeynta gobolkaas”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta soomaaliya.
Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan(Yariisow) ayaa sheegay in howlgalka ciidanka uu yahay mid lagu xoojinayo dagaalka lagula jiro kooxaha argagaxisada ah ee Al-Shabaab.
Ciidamo isugu jira Soomaali iyo Maraykan ayaa laba maalmood ka hor waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ururka Al-Shabaab ku lahaayeen deegaan ku dhow degmada Afgooye ,howlgalkaasna waxa ku dhintay mid kamid ah ciidamada Maraykanka halka laba kalena uu dhaawac soo gaaray.